प्रत्यक्ष स्वचालित रूले
रूले कुनै पनि परिचय आवश्यक छैन. रूले कहिल्यै क्यासिनो को शुरूआत देखि एक राजा जस्तै क्यासिनो को दुनिया शासन गरिएको छ. सबै क्यासिनो खेलाडीहरू बेलायत रूले प्रत्यक्ष बोनस कहिल्यै राम्रो क्यासिनो खेल हो भन्ने कुरामा सहमत थियो र सधैं सबै भन्दा राम्रो हुनेछ.
प्रत्यक्ष स्वचालित रूले परम्परागत रूले एक प्रगति छ. रूपमा नाम भन्छन्, यो खेल परम्परागत रूले को स्वचालित अनलाइन संस्करण हो. सबै भन्दा राम्रो भाग प्रत्यक्ष खेल्न सक्छन् कि यो अनलाइन रूले अन्य खेलाडीहरू छ. यो खेल सार्थक र छैन पनि दोस्रो अनुभव के तपाईं यस लोकप्रिय क्यासिनो खेल को अनलाइन संस्करण खेलिरहेका छन् भन्ने महसुस थियो बनाउँछ.
प्रत्यक्ष स्वचालित रूले को विकासकर्ता बारे
यो स्लट NetEnt विकास छ. बस क्यासिनो खेल जस्तै, यो क्यासिनो खेल विकासकर्ता कुनै पनि परिचय आवश्यक छैन. वर्ष मा स्थापित 1996, यसलाई आफ्नो टोपी मा धेरै प्वाँख संग अग्रणी क्यासिनो खेल विकासकहरूको छ. विगतका देखि 20 वर्ष, NetEnt सबै भन्दा राम्रो क्यासिनो खेल विकास अनलाइन क्यासिनो उद्योग सेवा गरिएको छ.
यहाँ उल्लेख गर्न पहिलो कुरा यो रूले बस परम्परागत भूमि आधारित Roulette जस्तै छ कि छ. मात्र फरक यहाँ तपाईं मोबाइल फोन स्क्रिनमा यो बेलायत रूले प्रत्यक्ष बोनस क्यासिनो खेल खेल्न पाउनेछ छ र यो, नै, एउटा अचम्मको अनुभव छ.
तपाईं स्वचालित छ कि एक पाङ्ग्रा प्राप्त हुनेछ, एक भुक्तानी तालिका र तपाईं पनि तपाईं संग बेलायत रूले प्रत्यक्ष बोनस खेल खेल्न खेलाडी संग कुराकानी गर्न सक्छन्. यो तलब तालिकाले पेआउट निर्णय गर्नेछ. यो Roulette हुनेछ 37 compartments. यो स्लट देखि संख्यात्मक गरिनेछ0गर्न 36.
बस परम्परागत रूले जस्तै, प्लेयर बाजी थाप्न आवश्यक र बल ठीक ठाउँमा घोप्टो भने, उहाँले यो बेलायत रूले प्रत्यक्ष बोनस मा जीत. चिप मानहरू 1,5,25,100 and 1000.
प्रत्यक्ष स्वचालित रूले खेल्न, प्लेयर चिप मूल्य छान्न र तालिका मा एक नम्बर वा सट्टेबाजी दायरा चयन गरेर बाजी थाप्न गर्न आवश्यक हुनेछ. प्लेयर एक भित्र गर्न सक्नुहुन्छ (सीधा शर्त, विभाजन शर्त, तीन लाइन शर्त, कुना शर्त, वा छ लाइन शर्त) वा बाहिर शर्त (जोर बिजोर, रंग, 1-18/19-36 वा स्तम्भ).
प्रत्यक्ष स्वचालित रूले सबैभन्दा अचम्मको अनलाइन क्यासिनो बेलायत रूले प्रत्यक्ष बोनस खेल मध्ये एक छ. यो खेल्न मजा छ र सबै भन्दा राम्रो पुरस्कार प्रदान गर्दछ. यो अनलाइन खेल सबै क्यासिनो प्रेमीहरूले लागि एक खेले छ.